LeTV LEECO The 1 Pro USA Version X800 Agab-saarista, TWRP Recovery, Afjarno iyo Sixidda Boot Dhibaatooyinka Loop | Show Top
LeTV LEECO The 1 Pro USA Version X800 Agab-saarista, TWRP Recovery, Afjarno iyo Sixidda Boot Dhibaatooyinka Loop
The LeTV The LEECO 1 Pro waa phone aad u fiican in ay qiimo aad u hooseeyo. dukaamada qaar waxa ay iibinta telefoonka for qiyaastii. £ 150. Si kastaba ha ahaatee, phone uusan iman oo leh dhibaatooyin yar.
phone The yimaadda guraa leh app YouTube jir ah kaas oo diiday in aad cusboonaysiiso version ugu dambeeyey. The phone has malware where apps are installed in the background and ads are served in the Chrome browser.
Waqtiga qoraal ma jiraan ROM rasmi ah updated. Waxaa jira ROM caadada oo waa xaliyo dhibaatooyinka kor ku xusan, laakiin waxaa jira ballan lahayn. Sidaa darteed, waxaa ka hawl yar si uu u xaliyo dhibaatooyinka kor ku xusan gudahood this ROM rakibay.
Waqtiga qoraal jirin ROM rasmi ah la heli karo. Haddaba ROM rasmi ah ayaa lagu sii daayay. Waxaa laga heli karaa this post. Ku xiridda ROM rasmiga ah waa habka ugu fudud si uu u xaliyo dhibaatooyinka furin iyo app la telefoonka ah.
TrustGo App The ka dukaanka Play Google ayaa tilmaamay in app keyboard Ant guraa ku jira furin ah. dhibaatada YouTube ayaa loo hagaajin karaa by uninstalling YouTube ka guraa iyo ku rakibidda YouTube ugu dambeeyay ee ka Google Play dukaanka.
phone ayaa la rujin in meesha laga saaro YouTube iyo keyboard Ant app furin ah.
The tilmaamaha soo socda ka rujin doonaa Le LeTV ah 1 Pro version USA oo keliya. Si kastaba ha ahaatee, afjarno leben kartaa telefoonka, sidaas haddii aadan ka hor tagaan waxa uu noqon doonaa mas'uuliyadda. Afjarno sidoo kale invalidates damaanad ah ee telefoonka. Sidoo kale waxaad awoodi doontaa in aad unroot aad telefoon taariikh dambe iyo soo celiso aad warranty.
soo socda waxa uu malaystay in aad isticmaasho Windows 10.
Afjarno Le LeTV ah 1 Pro USA Version
Ku rakib TWRP
TWRP u ogolaan doonaa inay wada rujin telefoonka. First waxa loo baahan yahay in la rakibo.
Si aad u rakibi TWRP, aad u baahan tahay in ay ku xidhmaan telefoonka in PC ah
Halkaan hoose diyaariyo PC ka hor inta aan xerto
Ku rakib Java JDK 8 isticmaalaya Chocolatey
Fur ah isla markiiba amarkiisa maamulaha
Lauch Nooca ee raadinta, xaq riix degdeg Command oo dooro Run sida maamulaha.
Copy iyo paste code soo socda galay amarka maamulka uu furmo suuqa degdeg ah si loo soo dajiyo chocolately
@powershell -NoProfile -ExecutionPolicy dhaaftaan -Command "iex ((net.webclient cusub-shay).DownloadString("https://chocolatey.org/install.ps1 '))" && PATH SET =% PATH%;%ALLUSERSPROFILE%  bin  chocolatey
Ku rakib iyo reserved JDK 8 by dhajinta code soo socda galay amarka maamulka uu furmo suuqa degdeg ah.choco install jdk8
Download, rakibi iyo reserved Android studio la isticmaalayo la bixin kari ee Mudanayaasha
Launch Mudanayaasha iyo aqbalo la bixin kari ah
In shaashadda final dooro lanuch Android Studio oo markaas ku dhameysan
Dooro dropdown reserved ka dibna waxay doortaa Tababaraha SDK
In Tababaraha SDK ah, hubi Driver USB Google ka tab Tools SDK iyo dooran OK
Xir degdeg ah amarka maamulka, ka dibna la furo degdeg ah amarka maamulka cusub iyo nooca adb. Waa in aad gargaar ka adb amarka soo laabtay. Taas macnaheedu waa in darawalka adb la geliyo oo diyaar u ah inay u tagaan.
Download version ugu dambeeyay ee TWRP gal PC ee this isticmaalaya link
Magaca file ka soo dejisan in recovery.img
Hadda waa wakhtigii ay u diyaar garoobaan telefoonka ka hor inta aan xerto our PC hore u diyaariyey. Haddii aad telefoon kabaha uma soo gelin android ka dibna aad ka boodi kartaa oo dhan of this #4 qaybta iyo guurto on in ay #5 (TWRP) qaybta hoose.
Tag goobaha ka dibna ku saabsan on your phone. Unlock fursadaha sameeysa by taabashada tirada dhisayo dhowr jeer.
Tag goobaha, fursadaha sameeysa iyo awood debugging USB
In bar wargelinta guji xiriiri fursado USB iyo in la hubiyo MTP in la doorto
Connect telefoonka in PC ah
In degdeg ah maamul loo hubiyo telefoonnada si sax ah ugu xiran by teeb
Waa in aad arki qalab ah oo ka yar qalabka adb
Download SuperSU iyo sida loo isticmaalo Tababaraha file ah in ay ku riday buugga xididka ah ee telefoonka ee
Halkaan hoose TWRP flash galay telefoonka. Ma aha in aad lumiso wixii xog ah, laakiin haddii aad leedahay xogta on telefoonka waa in aad gurmad ah oo kaliya haddii ay dhacdo.
Waxaan u baahanahay inaan kabaha galay fastboot. On PC ah, furi ah isla markiiba maamulka amarka iyo nooca
Haddii qalab aad ma Boot galay android, waxaad tegi kartaa fastboot by bedesheen off aad telefoon, qaban furaha mugga hoos ka dibna riix badhanka awoodda.
Marka in fastboot waa in aad fiiri sawirka yar oo pingvin a dhexe ee shaashadda. Si aad u hubiso in taleefanku xiran yahay, in amarka maamulka nooca degdeg ah
Waa in aad arki qalab aad ku qoran
In degdeg ah amarka maamulka loo hubiyo in aad tahay tusaha of file recovery.img iyo nooca socda
flash fastboot recovery.img kabashada
Marka kabashada la bexeen nooca socda iyo qaban muhiimka ah mugga ilaa guuleysatey in dib u soo kabashada
Waa in aad hadda noqon in TWRP. In TWRP waxaa laga yaabaa in fursad siyaadinay ama goobaha si loo soo dajiyo SuperSU. Haddii xulashada ma aha waxaa isticmaali rakibi si loo soo dajiyo SuperSU (soo bixi hore) ka asalka u ah kaydinta telefoonka.
Marka lagu rakibay aad reboot karaa android iyo raacaya tilmaamaha ku jira app SuperSU ah.
Marka la rakibo waa dhameystiran download ah RootChecker app ka Google Play dukaanka iyo hubi haddii qalab la rujin.
Sixidda dhibaatada la YouTube oo ay ka saareen furin ah
Ku rakib Easy Uninstaller, Madax qoriga Killer iyo Malwarebytes Anti-Virus ka Store Google Play.
Uninstall YouTube iyo keyboard Ant. Waxaan uninstalled Cantonese Language keyboard iyo Browser MII sidoo kale waxaan ahaa ma isticmaalaan. Haddii aad bilowdo helitaanka qaladaad, si fudud reboot qalab aad.
Download iyo rakibi ah YouTube app ka Google Play Store ah.
Orod qoriga madax ka Killer oo looga saari lahaa wixii Trojans helay.
Orod ku Malwarebytes Anti-Virus iyo ka saar wax kasta oo fayrusyada helay. Orod scanner gaarka ah iyo raacdo talooyinka.
Marka aad si guul leh u dhameystiray tallaabooyinka kor ku xusan ka dibna qalab aad waa in ay ahaataa furin xor ah oo si buuxda u isticmaali karo.
qalab My waxaa bricked
qalab aad waxaa laga yaabaa in aan la bricked. Waxa kaliya laga yaabaa in u muuqata bricked sida shaashadda laga yaabaa in aan ku soo noqdaan oo ha eedayn doonaa. Haddii tani ay tahay kiiska ka tago qalab aad ugu yaraan toddobaadkii aan ku amraya oo dhan si ay xoogga oo dhan waa lagaga miiro meesha ka baxay. Toddobaad kaddib waxaa ku xidhmaan xeedho iyo arko haddii ay muujinayso tilmaame iftiinka LED. Haddii uusan LED iman on dibna u ogolaan in ay telefoonka lacag ah oo ku saabsan 90 daqiiqo ka dibna hoos u qaban mugga iyo awoodda button. icon pingvin The waa in shaashadda. Haddii aad aragto pingvin ka dibna waxaad sii wadi kartaa ka E.ii ka tilmaamaha ku xusan.
qalab My waa in bootloop a
Haddii ay arintu sidan tahay ka dibna kaliya qaban button awood for ah oo ku saabsan 15 ilbiriqsi ilaa qalab off waa. Markaasuu hoos u qaban mugga iyo batoonka. icon pingvin The waa in shaashadda. Haddii aad aragto pingvin ka dibna waxaad sii wadi kartaa ka E.ii ka tilmaamaha ku xusan.
Android uma shaqeeyo
Waxaa laga yaabaa inaad u baahan tahay in dib-u-iftiimiyo ROM ah. The version USA asalka ah ee ROM waxaa laga heli karaa halkan.
Anigu garan maayo haddii aan version USA
Fiiri sanduuqka of qalab. If it has the web address of the USA website then it should be USA version, in kastoo aanan u damaanad qaadi kartaa.
Android How To 5 comments Item Jaishi
← Partitioning Scheme ee Server ah Web Linux LeTV LEECO The 1 Pro X800 USA Version ROM Original 5.5.011S Download, rajeenayo in Agab, bootloop, La'yahay Update Software & Youtube →
LeTV LEECO The 1 Pro X800 USA Version ROM Original 5.5.011S Download, rajeenayo in Agab, bootloop, La'yahay Update Software & Youtube
5 fikirrada on "LeTV LEECO The 1 Pro USA Version X800 Agab-saarista, TWRP Recovery, Afjarno iyo Sixidda Boot Dhibaatooyinka Loop”
caafimaadka, Waxaan soo raacay dhammaan tallaabooyinka si ay warqaddii, Si kastaba ha ahaatee, markii aan ku qor in hab admin ee Console ah “qalab fastboot” natiijada kasta…. waa madhan… waxa la sameeyo?
Demi telefoonka. Qabo muftaaxa mugga hoos ka dibna riix badhanka awoodda. Waa in aad arki pingvin ah shaashadda (tani waa hab fastboot). Haddaba xidhmaan telefoonka in PC ah. In maamulka amarka nooc degdeg ah 'qalabka fastboot'.
Waxaan sameeyaa dhaqdhaqaaq this, arkay pingvin sida qalabka kabaha,
laakiin markii aan u tagaan hab admin on Console ah : waxaan ku qor “qalab adb” qalab aan u muuqataa in liiska.
laakiin markii aan ku qor “qalabka fastboot =”complete nothingness ” waxa aanu ka muuqan, la est mon problème 🙁